एक स्कुले शिक्षिका नीताको कसरी भयो अर्बपति मुकेश अम्बानीसँग विवाह ? – Khabar Silo
मुकेश अम्बानीका पिता धिरुभाइ अम्बानीले नितालाई एक नृत्य कार्यक्रममा भेटेका थिए । उनले नितालाई केही दिनसम्म विशेष काम छ भनी बोलाइ राखेका थिए । अन्ततः उनले आफ्नो मनको कुरा भने छोडे । उनले आफ्नो ठुलो छोरा मुकेश अम्बानीलाई भेट्न आग्रह गरे । उनले पनि नाहिँनास्ती गर्न सकिनन् । त्यसपछि उनको भेट मुकेश अम्बानीसँग भयो ।
मुकेश र निता बारम्बार भेट गर्न थाले । अन्ततः ती भेटहरु प्रेममा परिणत हुन बेर लागेन । मुकेशले आफ्ना मनका भावनाहरु थाम्न सकेनन् । मुम्बईको अत्यन्त व्यस्त स्थलमा मुकेशले नितालाई प्रपोज गरे । निताले आफ्ना भावनाहरु नियन्त्रण गरिन् । तर, उतिखेरै भने उनले प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरिनन् । सन् १९८५ मा मुकेश र निताको विवाह भयो । विवाह गर्दा निता २२ वर्षकीमात्र थिइन् । विवाह पुर्व टिचर पेशा अपनाइ रहेकी उनले विवाहपछि पनि केही वर्ष पढाउने काम गरिन् ।
यी दम्पत्तिको दुई छोरा र एक छोरी सन्तान रहेका छन् । निता अम्बानीले आइभिएफ मार्फत दुई जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन् । निता अम्बानीलाई पौडी खेल्न, नाच्न, र आफ्ना सन्तानहरुसँग समय बिताउन एकदमै मनपर्छ ।
निता अम्बनीको तौल कुनै समय ९० केजीभन्दा बढी थियो । उनले आफ्नो छोरा अनन्तलाई तौल घटाउन ठुलो प्रेरणा दिने काम गरेकी थिइन् ।
पुजासँग किन खुले आकाश ?
फिल्म । पछिल्लो समय फिल्मनगरीमा पुजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीको चर्चा राम्रो हुने गर्छ । यी दुइ प्रेममा रहेको गसिप त छ नै साथै फ्यानले पनि बेलाबखतमा सोसल मिडियामा दुइलाई नै ‘विवाह कहिले गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् । यी दुइ पनि अनस्क्रिनको जोडीको रुपमा दर्शकले रुचाउदा निकै उत्साहित छन् । तर , […]
‘बादशाह जुट’ को ‘सुसाइड..’ गीतमा सुशील र रोशीको प्रेम